Founder - SAINT JOSEPH UNIVERSITY COLLEGE (SJUC)
He is now the founding director of CAD (Community Agency for Rural Development) which is Myanmar based Non-governmental Organization since 2004. Under his leadership, there are about 50 staffs who are spearheading community development programs (agriculture, farmer’s capacity building, community drinking water, weir construction, irrigation facilities, vocational trainings for women and girls, community health education, road and bridge construction, school construction, seed and farming tools support to farmers, researchers, civic education and community based nursery schools) across the remote country where neither UN agency nor International NGO is existent at all. To add, he is alsoapublisher and chief-editor of Gloria News Journal in Burmese since 2013. This media isamonthly journal, streamlining on Global Catholic news and teachings on moral, social and spiritual issues, educating civil and religious laws to readers. Finally, he is also the founding principle of Joseph Education Institute (JEI) since 2015.This institute is providing theological education to lay people in Myanmar and management training to people who are also builders of the societies and Myanmar. During these two years, there are already 154 students who are doingadistant theological studies. The final plan is to openaresidential program of Joseph University in 20 years.
ဂျိုးဇက်ကုန်ဇမှုန်း (ဝင်းလှိုင်ဦး) သည် ၁၉၇၄ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၂၀) ရက်နေ့တွင် မကွေးမြို့၌ မွေးဖွားပြီး ချင်းလူမျိုး ဖြစ်သည်။ သူ၏ မိဘနှစ်ပါး အမည်မှာ ဂျွန်ဦးထန်းနှင့် မော်နီကား ရွှေဘော တို့ ဖြစ်ကြပြီး လက်ရှိတွင်မူ မိဘများသည် ချင်းပြည်နယ်၊ ထန်တလန်မြို့နယ်၊ နှရိန်းမြို့တွင် နေထိုင်လျက် ရှိကြသည်။ သူသည် မူလတန်းမှ ဆဋ္ဌမတန်း အထိ နှရိန်းမြို့တွင် ပညာဆည်းပူးခဲ့ပြီး သတ္တမတန်းနှင့် အဋ္ဌမတန်း တို့ကိုမူ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ အနီးစခန်းရွာတွင် လည်းကောင်း၊ အထက်တန်း ပညာရပ်ကို အထက (၂)၊ လားရှိုးမြို့တွင် လည်းကောင်း၊ တက္ကသိုလ် ပညာရပ်ကို ရတနာပုံ တက္ကသိုလ်တွင် လည်းကောင်း သင်ယူပြီး ဥပဒေဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့သည်။ ၁၉၉၉ ခုနှစ်မှ ၂၀ဝ၀ ခုနှစ် အထိ ဒဿနိက ဗေဒပညာရပ်ကို ပြင်ဦးလွင်ရှိ ကက်သလစ် ရဟန်းဖြစ် တက္ကသိုလ်တွင် သင်ယူခဲ့သည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင်မူ အင်္ဂလန်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ အထူး အစီအစဉ်ဖြင့် အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၊ ရော့မြို့ရှိ ရော့တက္ကသိုလ် (University of York) တွင် Political Science နိုင်ငံရေး သိပ္ပံပညာရပ်ကို သင်ယူခဲ့ပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်မ ှစပြီး ထိုင်းနိုင်ငံ Assumption University တက္ကသိုလ်တွင် M.B.A (Master of Business Administration) စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှု မဟာဝိဇ္ဇာပညာရပ်ကို သင်ယူလျက် ရှိသည်။
သူသည် ဘာသာရေး စာအုပ်ပေါင်း (၈) မျိုးကို ရေးသားခဲ့သည့် အပြင် ရဟန်း မင်းအမတ် ဆရာ တော်ချားလ်စ်ဘို၏ ဩဝါဒပေါင်းချုပ် စာအုပ် (၄) ကိုလည်း တည်းဖြတ် ထုတ်ဝေခဲ့သည့် အပြင် ဆရာတော်၊ ရဟန်းတော်များ၏ ဩဝါဒ ဗီဒီယိုခွေ (၄) မျိုးကို လည်း ထုတ်ဝေပြီး ဖြစ်သည်။
သူသည် ၂၀ဝ၆ ခုနှစ်တွင် ကက်သလစ် ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင် အမျိုးသမီး ဖြစ်သူ ဒေါ်အယ်မလီနှင့် အိမ်ထောင်ပြုပြီး သမီးနှစ်ဦး ထွန်းကားကာ ရန်ကုန်မြို့တွင် နေထိုင်နေပါသည်။ ၂၀ဝ၄ ခုနှစ်မှ စတင်ပြီး လူထုအကျိုးဆောင် ကျေးလက်ဖွံ့ ဖြိုးရေးအဖွဲ့ NGO ကို လည်းကောင်း၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်မူ ဂလိုရီယာ သတင်းဂျာနယ် Gloria News Journal ကို လည်းကောင်း၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မူ ဂျိုးဇက် ပညာရေးကျောင်း Joseph Education Institute ကို လည်းကောင်း ထူထောင်ပြီး တိုင်းပြည် တိုးတက်ရေးနှင့် သာသနာ ထွန်းကားရေးအတွက် လုပ်ဆောင်ပေးနေသော ကက်သလစ်ခရစ်ယာန်ဘာသာ ဝင်တစ်ဦး ဖြစ်ပါသည်။